Friday July 19, 2019 - 13:35:09 in Wararka by Mogadishu Times
1- Qooys Reer miyi ah oo ku fiidsanayay Aqalka hortiisa ayaa Dayaarad jawi hoose ku duulee soo kor martay, waqtigaa Dayaarad lama aqoon. Odaygii ayaa orday, Xaaskii ayaa ka daba oraday, haddana Caruurtii ayey u soo noqotay, lana oroday. Markii la so
1- Qooys Reer miyi ah oo ku fiidsanayay Aqalka hortiisa ayaa Dayaarad jawi hoose ku duulee soo kor martay, waqtigaa Dayaarad lama aqoon. Odaygii ayaa orday, Xaaskii ayaa ka daba oraday, haddana Caruurtii ayey u soo noqotay, lana oroday. Markii la soo wada noqday ayeey ku tiri: war Raggii hore Xaaskooda iyo Caruurta kama ordi jirin ee maxaa ku helay. Waxa uu ku yiri: War Raggii hore Cirka lagama soo weerari jirin, hadda cirkaa laga yimid. ( F.S: 1aad) ( Siyaasiyiintii hore "Arrimaha Dibadda" Bad iyo berri laguma qabsan jirin oo waa laga baqi jiray, "Arrimaha Gudahana" Xuduud dhagaxa iyo Mas'uul habeenkii guryaha loogu dhaco ma jirin. Maanta side wax u jiraan?)
3-Nin ayaa waxa uu booqasho ku aaday Sheekh Afgooye degan, waxaa lagu yiri: Shiikhu "khilaawo” ayuu ku jiraa,7 Maalmood cidna lama hadlayo, Gurigana kama soo Baxayo 7 billood . Ninkii ayaa yiri: Walee shiikhaasu Reer Mudug ma ahan. Waxaa lagu yiri: Sideed ku ogaatay? Waxa uu yiri: Nin Reer Mudug ahi 7 Maalmood ma aamusnaan karo, Ballan Siyaasadeedna 7 billodd ma dhowri karo.